Global Voices teny Malagasy » Lavin’i Taiwan ny hanolotra ilay mpitsabo mpanampy “nanevateva” ny filoha Filipiàna tao amin’ny Facebook · Global Voices teny Malagasy » Print
Lavin'i Taiwan ny hanolotra ilay mpitsabo mpanampy “nanevateva” ny filoha Filipiàna tao amin'ny Facebook
Voadika ny 17 Jona 2020 3:15 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Taiwan (ROC), Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, GV Mpisolovava
Ireo mpiasa ao amin'ny Biraon'ireo Filipiana miasa any Ivelany mankalaza ny Andro Erantany ho an'ny Asa tao Taichung, Taiwan ny 01 May 2020. Sary avy amin'ny pejy ofisialin'ny masoivohom-panjakana Filipiàna
Nolavin'i Taiwan ny fangatahan'ny manampahefana iray misahana ny asa ao amin'ny governemanta Filipiàna mba hampodiana ramatoa iray mpitsabo mpanampy voalaza ho nanoratra lahatsoratra nanevateva tao amin'ny media sôsialy.
Ny 25 Aprily 2020, namoaka fanambaràna an-gazety  ny tranonkala ofisialin'ny Departemanta misahana ny asa sy ny fampananana asa ao Filipina (DOLE), avy amin'ny Attaché Fidel V. Macauyag tomponandraikitra iray ao amin'ny Biraon'ireo Filipiàna miasa any ivelany (POLO) momba ny fangatahana hampodiana mpitsabo mpanampy iray ao Taiwan noho izy io nanao fanamarihana “maharikoriko sy nasiaka” namely ny Filoha Rodrigo Duterte.
Voatery izahay hitaky ny fandroahana ramatoa Filipiàna iray manao asanà mpitsabo mpanampy aty Taiwan noho ny heloka fanalambaraka an-tserasera nataony famin'ny nanaovany fanahy niniana namoaka lahatsoratra maharikoriko sy masiaka mamely ny Filoha Duterte tety anaty Facebook ikendrena ny hisian'ny fankahalàna azy ao anatin'izao olana ara-pahasalamàna manerantany ateraky ny valanaretina COVID-19 izao.
Nampian'ilay fanambaràna ihany koa fa io mpitsabo mpanampy io dia “manana vondrona voarindra hanao izay hanaratsiana sy hitatasiaka momba ny filoha mba hanozongozonana ny governemanta.”
Ilay Filipiana Mpila Ravinahitra any Ivelany (OFW) voatonona tao anatin'ilay fanambaràna dia i Elanel Egot Ordidor, mpitsabo mpanampy miasa ao amin'ny faritanin'i Yunlin any Taiwan efa ho telo taona izao. OFW ihany koa ny vadin'i Ordidor ary nijanona mipetraka any Filipina kosa ny zanak'izy ireo telo.
Tombanana ho 12 tapitrisa any ho any ireo OFWs manerana izao tontolo izao. Manana 150.000 OFWs eo ho eo i Taiwan, izay ny ankamaroany dia any anaty ozinina na mpanampy an-trano.
Ambaran'ilay fanambaràn'ny DOLE fa tany am-boalohany i Ordidor dia nanaiky ny hiara-hiasa, tamin'ny fanekeny hanaisotra ireo lahatsariny manala baraka ary hanao fialantsiny amin'i Duterte. Saingy nambaran'ny POLO fa notohizan'i Ordidor ny famelezana ny filoha tamin'ny alàlan'ireo lazaina fa kaontiny hafa ao amin'ny media sôsialy, ka nahatonga ny birao “handrindra miaraka amin'ny masoivoho mpiahy sy ny mpampiasa azy ny fampodiana azy noho ny halehiben'ny vesatr'ilay faniratsiràna, araka ny voalazan'ny Lalàna Filipiàna.”
Nohelohina ho nanao fanalambaràka an-tserasera i Ordidor, araka ny Andininy 10175 ao anatin'ny Lalàn'ny Repoblika.
Nanakiana  tsy tapaka ny fomba fitantanan'ny governemantan'i Duterte ny COVID-19 i Ordidor tao amin'ny pejiny Facebook . Nesorin'ny Facebook ny sasany tamin'ireo lahatsary nalefany, saingy notohizany ny fandefasana lahatsoratra manakiana ireo fepetra fihibohana henjana manakana ny mahantra sy ireo mpiasa tsy hahita fivelomana.
Voalaza fa nanoratra izy hoe marobe no ho fatin'ny hanoanana sy ny fahantrana, fa tsy noho ilay viriosy.
Nolavin'ny  Ministeran'ny Raharaha Ivelany ao Taiwan ilay fangatahana fampodiana an'i Ordidor, ary notsindriany fa misitraka ny fomba fikarakarana azon'ny teratany ireo mpiasa mpila ravinahitra any, tafiditra ao anatin'izany ny fahalalahana maneho hevitra.
Namerina  ihany koa izay fijerin'ny minisitra izay ny tale jeneralin'ny asa ao departamanta misahana ny asa any amin'ny faritanin'i Yunlin ary nanome toky an'i Ordidor fa afaka tohizany ny asa amin'ny maha-mpitsabo mpanampy azy.
Naneho  fisaorana ny governemanta ao Taiwan i Ordidor, tao anaty tafa iray ho an'ny mpampahalala vaovao:
Faly aho ary tena feno fankasitrahana tanteraka ny governemantan'i Taiwan tamin'izay nambarany momba ny fanajàna ny zoko.
Tsapako fa nohenoin-dry zareo izay zavatra nezahako nampitaina ary izany dia mampiseho fa eto Taiwan, omena lanja tokoa ny demaokrasia.
Jereo ary henoy ny resak'i Linn Ordidor momba izay maharesy lahatra azy, ary ny antony iheverany fa ilaina ny fahasahiana mijoro sy mizara ny heviny, na mety hanafintohina ny matanjaka aza izany. Ato: https://t.co/TPweLGxcbq 
Niala tsiny  avy hatrany tamin'i Taiwan i Angelito Banayo, filoha sady solontenan'ny Biraon'ny Toekarena sy ny Kolontsaina ao Manila (MECO) any Taiwan.
MECO no solontena ofisialin'ny governemanta filipiàna ao Taiwan. Nambaran'i Banayo fa hetsika nataony samirery ny an'ny POLO, tsy nakàna ny hevitry ny MECO.
Niteraka hatezerana tany Filipina ilay raharaha. Notanisaina ho toy ny porofo vaovaon'ny tsy fandeferan'ny governemantan'i Duterte amin'ny mpanohitra.
Ny “Migrante International”, fikambanana iray manome tohana ho an'ireo OFWs, dia niampanga  ny POLO ho diso laharampahamehana :
An'alinaliny maro ireo Filipiàna mpiasa mila vonjy, araraotina, tafahitsoka sy tsy asiana vidiny no mila vonjena sy ampiana, saingy ireto olom-panjakana ao amin'ny POLO aty ivelany ireto kosa nisafidy ny hanokana ny fotoanan-dry zareo hivondrona hanenjika an-dramatoa Ordidor noho ny fomba fijeriny manakiana fotsiny ny filoha Duterte. Tena natao tanteraka izao mba hamiliviliana ny sain'ny vahoaka tsy hibanjina ny tsy fahavitàn'ny fitondràn'i Duterte miatrika ny valanaretina COVID-19 sy ny fihemorana ao Filipina.
Ilay mpitarika ireo loholona avy amin'ny vitsy an'isa ao Filipina, Franklin M. Drilon, nitaky  ny fanesorana ilay tomponandraikitra misahana ny asa ao amin'ny POLO:
Ny iraka ampanaovina azy dia ny hampiroborobo ny tombontsoa / fiadanan'ireo OFWs antsika ireo. Nasehony ny faratampon'ny haavon'ny tsy fahalalàny. Mbola ratsy kokoa noho izay, maha-ratsy endrika ny governemanta filipiàna ny zavatra nataony.
Ny fihetsika tsy tomponandraikitra nataon'ing. Macauyag manoloana ireo Filipiàna mpila ravinahitra tsy misy mpiahy dia mazava tsara fa fandosirana ny voady nataony hiaro ny tombontsoa sy fiadanan'ireo OFWs.
Nanainga  ireo manampahefana i Atty Jacqueline Ann de Guia, mpitondratenin'ny Kaomisiona momba ny Zon'olombelona, mba hanaja ny fahalalahana maneho hevitra:
Tohizanay ny fampahatsiahivana ny governemanta fa takian'ny asam-panjakana ny faratampony amin'ny fahaizana mandefitra manoloana ny fanehoankevitra sy ny kiana, ary indrindra indrindra, mandeha tsara ny demaokrasia iray rehefa misy ny kabary madio mangarahara momba ny fitantanana; hahafahana, araka izany, mitaky tamberin'andraikitra misimisy kokoa amin'ireo mpiasam-panjakana eto amintsika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/06/17/148111/
 fanambaràna an-gazety: https://www.dole.gov.ph/news/press-statement-on-the-deportation-of-a-filipina-caregiver-in-taiwan-for-the-crime-of-cyber-libel/
 pejiny Facebook: https://www.facebook.com/lenelallen.egot
 April 30, 2020: https://twitter.com/rapplerdotcom/status/1255819710261628929?ref_src=twsrc%5Etfw
 Niala tsiny: https://globalnation.inquirer.net/187323/meco-exec-apologizes-to-taiwan-over-ofw-deportation-issue?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2HRz_H57-QHbVJn8pLmmyeYdligBwYqaVpU575XF5gKZBPpf_z49ZSz1w#Echobox=1588133945
 dia niampanga: https://migranteinternational.org/2020/04/25/stop-using-taiwan-ofw-as-a-punching-bag-to-divert-peoples-attention-from-dutertes-inutility-migrante-international-to-dole/?fbclid=IwAR1j8lHLR0_OVTO9bcAvegjGopJSSOOkEHptxm37BYvNx87llnwgPVosxSc